ग्लोबल आईएमई बैंक र आइएमई लाइफबीच बैंकास्योरेन्स
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौतासँगै बैंकका १३१ वटै शाखाहरु मार्फत ग्राहकले आइएमई लाइफको जीवन बीमा योजनाहरु खरिद..
काठमाडौं । २१ औं शताव्दीको सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण आज लाग्दै छ । यो चन्द्र ग्रहण करिब १ घण्टा ४३ मिनेटसम्म रहने छ । यसलाई नेपालबाट पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ..
अब राजश्व लगायत सरकारी कारोवार बैंक तथा विद्युतीय प्रणालीमार्फत
काठमाडौं । राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सरकारी कारोवार गर्ने सबै बैंकका शाखामा राजश्व जम्मा गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजश्वलगायत आर्थिक कारोवारलाई चुस्तदुरुस्त,..
काठमाडौ । सरकारी कार्यालयको खाता भएको बैंकको शाखाबाट मात्र कर बुझउन सकिने यसअघिको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारले खाता भएको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट करदाताले कर भुक्तान गनइ सक्ने व्यवस्था लागू गरेको..
जुम्लावासीले माला लगादिएर डा केसीलाई काठमाडौं पठाए
काठमाडौं । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत डा गोविन्द केसी थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याईएको छ । केही बेरअघि अस्पताल प्रशासनमा सरकारी पक्ष र डा केसीपक्षधरबीच वार्ता भएको थियो । प्रशासनले..
ओली र प्रचण्ड पनि महाधिवेशनमा भाग लिन निर्वाचित हुनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशनरअधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । एकतापछि गठित नेकपाको विधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले..
भारतीय मुद्रामा ऋण लिन खुला गर्ने मौद्रिक नीति खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकहरुलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएकोमा सो नीति बदर गर्न र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई सो..
अझै तीन दिन देशभर वर्षा हुने, सजग रहन अपिल
काठमाडौं । आगामी तीन दिनसम्म देशभरि नै बद्ली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ । महाशाखाले तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानबारे विज्ञप्ति जारी देशभर हल्कादेखि मध्यम..
वाढीको फोटा फेसबुकमा हालेर पानी जहाजको कुरा गर्नेलाई साइबर क्राइममा कारबाही : महेश बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेश बस्नेतलेसामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेर पानी जहाजको कुरा गर्नेलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् । बाढीको फोटो हालेर पानी जहाजको कुरा गरेर..
भक्तपुरको भाटभोटेनी सुपर मार्केटदेखि स्यामसुङ कम्पनी पूरै डुबानमा
भक्तपुर । गए राति परेको भीषण वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुर र मध्यपुर डुबानमा परेका छन् । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण भक्तपुरका जगाती र बाराही स्थानका बस्तीमा पानी..
एक करोड सहित वीरगञ्जबाट हुण्डी कारोबारी पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले वीरगञ्जबाट हुण्डी कारोबार गरिरहेको अवस्थामा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । एसपी रेवती ढकालले हुण्डी कारोबारमा संलग्न राहुल केशरीलार्इ पक्राउ गरेको पुष्टि गरे । एसपी ढकालले अनुसन्धानको क्रम..
ट्रम्पले पेट्रोलियम बजारलार्इ अस्थिर बनाएको आरोप, ट्रम्पको ट्वीटले ग्यासको मूल्य बढ्यो
तेहरान।इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेट्रोलियम बजारलाई अस्थिर बनाएको आरोप लगाएको छ । शनिबार इरानी तेल मन्त्री बिजान नामदार जानगनेहले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोल्दै भने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ट्वीटरमार्फत तेल निर्यात गर्ने..
सुस्ताबासीले गण्डक नहरको बाँध भत्काए, भारतीय पक्षसँग छलफल शुरू
काठमाडौं । सुस्ताबासीले गण्डक नहरको बाँध भत्काएका छन । भारतीय पक्षका कारण बर्षौ देखी समस्यामा पर्दै आएका सुस्ताबासी नेपाल सरकारले समेत कुटनीतिक समाधान नखोजेपछि बाँध भत्काएको बताएका छन । दुइ दिन..
नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेल काठमाडौं ल्याउने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच रेल विस्तारसहित विभिन्न सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीवार ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ग्रेट हल अफ पिपुलमा..
नेपाल-चीनबीच आठ परियोजना अगाडि बढाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
बेइजिङ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण..
प्रदेश र स्थानीयको अधिकारमा अंकुश, अनुदान फ्रिज भए संघीय सरकारको खातामा
काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो। यस्तो..
ट्याक्सीले ठग्यो ? ९८५१२७३२२२ फोन वा एसएमएस गर्नुस्
काठमाडौं । तपाईं ट्याक्सीबाट ठगिनुभयो या ट्याक्सीले मिटरमा जान मानेन ? त्यसो हो भने ९८५१२७३२२२ फोन वा एसएमएस गर्नुस् । सरकारले ठग चालकहरूमाथि कारवाही हुने दावी गरेको छ । यातायात व्यवस्था..
११९ जनाको टोली सहित प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान, ‘ केरुङ -काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता हुने’
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको विमानबाट बिहान ९ बजे ११९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान..
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभा सांसद २ वर्षसम्म हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल दुई वर्षमात्र कायम भएको छ । नेकपाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका खतिवडा हाल अर्थमन्त्री छन् । सोमबार भएको गोलाप्रथामा उनलाई दुई वर्षे कार्यकालको चिठ्ठा परेको..
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सांसद ६ वर्षसम्म हुने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको टुंगो लगाउन भएको गोलाप्रथाको क्रममा थापाको कार्यकाल ६ वर्ष हुने टुंगो लागेको हो । बादल माओवादी..
राष्ट्रियसभामा कोमल ओली ४ बर्षे सभासद अन्य महिला सदस्यको कार्यकाल कति ?
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि सोमबार गोलाप्रथा भइरहेको छ । संसद भवनमा अहिले महिला तर्फका सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका लागि गोलाप्रथा भइरहेको छ । अहिलेसम्म सबै प्रदेशको महिला तर्फको कार्यकाल..
कहाँ-कहाँ भयो हिलोसहितको वर्षा ?
काठमाडौं । शुक्रबार साँझपछिको बर्षा अन्य दिनको भन्दा फरक रह्यो, घर आगन र आसपासको बोट बिरुवा हिलाम्मे भएका छन् भने, अन्य सामाग्रीमा समेत हिलो, धुलो र मैलो लागेको छ । बर्षाले..
गृहको निर्देशन : एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण पठाउनू
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग्न सुरु गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँ रहेका एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीको..
प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार चीन भ्रमणमा जाने, बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा हस्ताक्षर हुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा आगामी असार ५ गते चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य..
बाजेको सेकुवाको ६ वटै आउटलेटमा सुन अनुसन्धान समितिद्धारा छापा
काठमाडौं । गृहमन्त्रालय माताहतको सुन तस्करी अनुसन्धान समितिले काठमाडौंको गैरीधारा, अनामनगर, बत्तिसपुतली लगायत राजधाीमा रहेका बाजेको सेकुवाको ६ वटै कर्नरमा छापा मारेको छ । संगठित अपराध निरावरण ऐन २०७० अनुसार मोरङ..
किमसँगको एेतिहासिक वार्तापछि ट्रम्पको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको छ । भेटपछि ट्रम्पले वार्ता ‘ अत्याधिक सफल र उत्कृष्ट सम्बन्ध’ भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया..
विश्वकप फुटबलको लागि काठमाडौं प्रशासनको १० बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विश्वकप फुटबलको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्दा कुनैपनि शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले सोमबार १० बुँदे सूचना जारी गर्दै प्रशासनको अनुमतिमा मात्र फुटबल..
सुन तस्करी प्रकरणमा आरके ज्वेलर्सको दरबारमार्ग र न्युरोडस्थित सुन पसलमा प्रहरीको छापा
काठमाडौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा अभियुक्त रहेका राजेन्द्रकुमार शाक्यको आरके ज्वेलर्सको दरबारमार्ग र न्युरोडस्थित सुन पसलमा प्रहरीले आज छापा मारेको छ। सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीको निर्देशनमा सोमबार दिउँसो प्रहरीले छापा..
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको रोचक सम्बन्ध
सोल । अगामी हप्ता सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच वार्ता हुने भएको छ। यसलाई शिखर वार्ता वा ‘समिट’ नाम दिइएको छ। यो शिखर वार्तालाई..
ओली सरकारलाई ‘ठेकेदार’ सांसदको चेतावनी, बसको सिण्डिकेट तोडे जस्तो होइन निर्माण व्यवसाय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले बसको सिण्डिकेट तोडे जस्तो निर्माण व्यवसायमा हात नहाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। संसद बैठकमा बजेट माथिको छलफलकै क्रममा सांसद लामाले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही..
Results 1994: You are at page 27 of 67